आज शुक्रबार शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण, ग्रहण लाग्दा के गर्ने, के नगर्ने ? कुन राशिलाई कस्तो असर ? - nabinnepal
आज शुक्रबार शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण, ग्रहण लाग्दा के गर्ने, के नगर्ने ? कुन राशिलाई कस्तो असर ?
Nabin Nepal July 26, 2018	Featured, विविध तपाइको प्रतिक्रिया 350 Views
साउन,११ / खगेन्द्र खरेल
आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन शुक्रबार राति खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । शुक्रबार राति १२ बजेर ९ मिनेटमा चन्द्रग्रहणले स्पर्श गर्ने समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलले राससलाई जानकारी दिए ।
पूर्णिमा तिथिका दिन सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी एउटा सरल रेखामा पर्दा सूर्य र चन्द्रमा १८० डिग्रीमा हुन्छ । त्यसबेला सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पृथ्वीको छायाँले चन्द्रमा ढाकिन्छ । पृथ्वी ठूलो भएको हुदा छायाँले चन्द्रमा पूरै ढाकिने भएकाले प्रायः खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
पछिल्लो सरकारसँग २२ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले २७ दिन लामो अनशन तोडे(पूर्ण पाठ )
arko त्रिशुली बस दुर्घटना अपडेटः ७ को मृत्यु, २१ घाइते,६ को अवस्था गम्भीर